foram yemahara | kunyoresa foramu yemahara | Pamusoro makumi maviri maforamu | Support | rupawo
Best Webforum kubvira 2004
Yakanyanya simba phpBB XTE 4.3
Kuenderera mberi kwekunyorera
Pasina mutengo, miganhu, kana kushambadza
Yakagadzirirwa injini dzekutsvaga
Subdomain kana yepamusoro-chikamu dura
CDN kubatana (Cloudflare)
Zvinoshandiswa kubhadharisa nguva 0.1 masekondi
Kubudirira nguva dzose (2022)
Kupindura zvakare kune mafoni
Yako dhizaini uchishandisa Style Admin
Mitauro yevashandisi zana inowanikwa
Iro yemusoro yemusoro graphic, ipfupi scroll time
more ...Inotsigira Messenger (Skype, Facebook)
Mushumo wevashandisi nehuwandu
Zviziviso uye piecing
Maka mhinduro dzechokwadi kumibvunzo
Kutsvaga kwakazara kwezvinyorwa uye kutsvaga kwepamberi
Kuzivisa nezvezvinyorwa zvitsva
Mafaira akabatanidzwa uye kudhinda kwekuona
Yambiro uye makaki
Kutumira kuongorora, kunyemwerera, masiginecha
Cockpits kune mwero & kutonga
Otomatiki mameseji zvipfupiso
Mvumo uye yekuwana kutonga
Bulk email uye zvekuzivisa
Avatars, masheti, data yepamberi
Ratidza misoro yakafanana
# Hashtag rutsigiro mumaposita
Kupinda kuburikidza ne Facebook kunogoneka
Meseji yepachivande uye mhenyu chat
Bhukumaka uye yekupedzisira machira
Kuparadzanisa uye kusanganisa yezvinyorwa
Mapuru ane sarudzo yakawanda
Kurumidza Kupindura uye Quotes
Zvirongwa zvevashandisi uye nemapoka
Yakasarudzika foramu panzvimbo ye Facebook boka!
Hapana misoro yenyaya kana mutsetse wemavara
Nzvimbo ye data ndeyeAustria
Mipiro ine kubatsira kwenguva refu
Tarisa nyaya pane vanhu
Pasina kuremerwa uye mazita chaiwo
Inogona kuwanikwa kuburikidza nekutsvaga injini
Hapana kutengeswa kwemushandisi data
Disiki uye kuveza
Kumhan'arira zvirimo zvisiri pamutemo mumaforamu: abuse@schagerer.com
Ndokumbirawo utore zvataurwa uye uzvipembedze nenzira yeanogona kushandisa iyo yeAustria Commerce Kodhi (ÖStGB).
1. Chikwereti chezvinyorwa zvewebsite ino
Isu tiri kugara tichivandudza zviri mukati mewebsite iyi uye edza kupa ruzivo rwakakwana uye rwunogumira. Nehurombo, isu hatigone kufungidzira chero mhosva yekurongeka kwezvinhu zvese zviri pawebhusaiti iyi, kunyanya kune izvo zvinopihwa nevechitatu mapato. Kune zviri mukati memaforamu akachengetwa uye akachengetwa mapeji akachengetwa, muridzi weforamu anoenderana uye asiri mushandi ane mutoro, izvi zvinopa chete hunyanzvi hwepuratifomu inowanikwa uye inokodzera maererano ne §16 ECG seye inopa mupi kwete kune nhengo dzayo nemabasa avo. Kana iwe ukacherekedza chero chinetso kana chisiri pamutemo zviri mukati, tapota taura nesu nekukurumidza, iwe uchawana iwo mazita ehukama mune iyo imprint.
2. Mhosva yezvirukwa pane ino webhusaiti
Webhusaiti yedu ine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti atinawo atisingakwanise kuitirwa zvinhu. Mhosva yemawebhusaiti akabatana haipo kwatiri maererano ne § 17 ECG, nekuti isu hatina ruzivo rwezviitwa zvisiri pamutemo uye hatina kuona zvisiri pamutemo izvi uye isu taizobvisa zvinongedzo nekukurumidza kana tikazoziva chero zvisiri pamutemo. Kana iwe ukaona zvisiri pamutemo zvinongedzo pane webhusaiti yedu, tapota taura nesu, iwe uchawana iwo mafoni ehukama mune iyo imprint.
3. Kuita otomatata data
Paunoshanyira mawebhusayithi nhasi, rumwe ruzivo rwakagadzirwa zvoga uye rwunochengeterwa, kusanganisira pane ino webhusaiti. Kana iwe ukashanyira webhusaiti yedu sezvazviri, webhusaiti yedu (komputa iyo iyi webhusaiti inochengeterwa) inochengetera dhata senge kero (URL) yewebhu webhusaiti yauri kutsvaga, browser uye browser browser, iyo system yekushandisa yakashandiswa, kero (URL) yeyakamboshanyirwa Peji (Referrer URL), iro zita rekutambira uye IP kero yemudziyo kubva kwarinowanikwa, uye zuva uye nguva mumafaira (Web server faira faira). Sezvo mutemo, webhu server dhifaira faira dzinochengeterwa kwemavhiki maviri uye ipapo ndokubviswa otomatiki. Isu hatidi kuburitsa ruzivo urwu, asi isu hatigone kutonga kuti zvichaonekwa mune zviitiko zvisiri pamutemo maitiro. Hwaro hwepamutemo, maererano neChinyorwa 6 ndima 1 f DSGVO (mutemo wepamutemo wekugadzirisa), ndewekuti kune kufarira kusiri kwemutemo mukukonzera kushanda pasina kukanganisa kwe webhusaiti ino nekutapa mafaira ewebhu diki.
4. Kuchengetedza kwega data
Yedu yedata yaunotumira nemagetsi kwatiri pane ino webhusaiti, senge zita, e-mail kero, kero kana imwe ruzivo rwevanhu mune mamiriro ekutumira fomu kana makomendi, ichagoverwa nesu pamwe chete nenguva uye IP kero yakashandiswa kune iyo yakatsanangurwa chinangwa, yakachengetedzwa uye isina kutaurwa kune wechitatu mapato. Isu tinongoshandisa yako yega data yekukurukura nevashanyi vanonyatsokumbira kubvunzana uye kugadzirisa masevhisi uye zvigadzirwa zvinopihwa pane ino webhusaiti. Isu hatizoreurura ruzivo rwako pachako pasina mvumo, asi isu hatigone kutonga kuti zvichaonekwa mune zviitiko zvisiri pamutemo maitiro. Kana iwe ukatitumira ruzivo rwevanhu ne e-mail, kure ne webhusaiti ino, isu hatigone kuvimbisa kutumira kwakachengeteka uye kuchengetedzwa kwedata rako. Isu tinokurudzira kuti usambotumira ruzivo rwakavanzika kuburikidza neemail. Nheyo yepamutemo pasi peChinyorwa 6 (1a) cheGDPR (mutemo wepamutemo wekugadzirisa) ndeyekuti iwe unotipa mvumo pakugadzirisa kwe data iwe raunopinda. Iwe unogona kudzorera kubvumirwa uku chero nguva, isina kurongeka e-mail yakwana, iwe uchawana yedu yekuonana ruzivo mune iyo imprint.
5. Kodzero maererano neGeneral Data Protection Regulation
Zvinoenderana nezvinopihwa GDPR uye Austrian Data Dziviriro Mutemo (DSG), ivo vane kodzero dzinotevera musimboti: kurudyi kururamisa (Article 16 GDPR), kurudyi kunodzimwa (Chinyorwa 17 GDPR), kurudyi kurambidzwa kugadzirisa (Chinyorwa 18 DSGVO), kurudyi kukwazisa, basa rekuzivisa zvine chekuita nekugadziriswa kana kubviswa kwewe pachako dhata kana kudzikiswa kwekugadzirisa (Chinyorwa 19 GDPR), kurudyi kune data portable (Chinyorwa 20 GDPR), kodzero yekupokana (Chinyorwa 21 GDPR), kurudyi, kwete imwe chete kuiswa pasi pesarudzo yakavakirwa pamunhu kugadzirwa kwemagetsi, kusanganisira kunyora, (Chinyorwa 22 GDPR). Kana iwe uchitenda kuti kugadzirisa kwedata rako kunotyora mutemo wekudzivirira data kana zvikasadaro zvaunoda zvekudzivirira data rakatyorwa munzira, unogona kunyunyuta kune maneja wekutarisirwa, ayo muAustria ndiye masimba ekudzivirira data.
Yedu webhusaiti inoshandisa HTTP cookies kuchengetedza mushandisi-yakatarwa data. Cheki kuki ipfupi yedhata repaketi inoshandurwa pakati pewebhu browser uye dura rewebhu, asi haina zvarinoreva kwavari uye rinongoshandiswa pawebhu webhu, senge webhu application. Seforamu, chirevo, semuenzaniso, nekuchengeta kwenguva pfupi data yemusangano neiyo account yemushandisi yawakapinda mune ino foramu. Kune mhando mbiri dzemakuki: Chekutanga-maboka makuki anogadzirwa newebsite, uye yechitatu-bato makuki anogadzirwa nemamwe mawebhusayithi (semuenzaniso Cloudflare). Kumwe kusiyanisa kunoitwa pakati pemhando nhatu dzemakuki, uyu musiyano uri pamusoro pekudiwa kwekushandiswa: makuki akakosha ekuona kuti mabasa ekutanga ewebhusaiti, makuki anoshanda kuti ave nechokwadi chekuita webhusaiti uye akatarisana nekuki kunatsiridza ruzivo rwevashandisi. Yedu yekutanga-makuki makuki anodiwa tekinoroji kuti ave nechokwadi chekushanda kwemasevhisi uye haana chero munhu data seyako IP kero kana yako e-mail kero. Makuki edu saka anowira pasi pekusarudzika kwe § 96 Telecommunication Act (TKG), sezvo sevhisi ingasashanda kune vese vashandisi kana makuki akaremara. Kubvumirana mukati mechinorehwa neTKG saka hakufanirwe. Zvikurukuru, aya ndiwo anotevera-mabiko ekutanga makuki: * _data, * _t, * _sid uye nenzira yakasarudzika xt_ddos_key, xt_fboff uye xt_banman sechikamu makuki eiyo login uye purogiramu yedhaiti, xt_cdn, xt_dir uye xt_rewrites kuti akutungamire iwe kuti uwane kuenda kuburikidza ne Cloudflare , pamwe ne xt_cookiecheck yekuita kuti iwe uzive necherechedzo padhuze nepanowanikwa mask, kana iwe wakaremara makuki mune yako yekuisa browser. Iyo yechitatu-pati-cookie __cfduid cookie inodiwa kubva kuCloudflare. Isu tinoshandisa masevhisi eCloudflare kuchengetedza masevhisi edu kubva pakurwiswa kweDDoS, zvikasadaro kuwanikwa kwavo kungadai kusipo. Cookies inoramba yakachengetwa pane yako kifaa kusvikira nguva yavo yekuvimbika yapera kana kusvikira iwe waidzima, izvo zvinogona kuitika zvichienderana nebrowser yekuisa paunovhara bhurawuza rako. Kana iwe usingawanzobvumidza isu kushandisa makuki, i. zadzisa izvi ne browser browser, mamwe mabasa uye mapeji haakwanise kushanda sezvanga zvichitarisirwa.
Inotsigira Messenger (Skype, Facebook)